TUB RAACA SIYAASADDA DAWLADDA PUNTLAND
Gen. Cadde Muuse: Puntland Kama Tirsana DFKMG ilaa laga samaynayo Dastuur Federaal ah...
Qoraal uu [Maarso 22, 2008] soo saaray madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland (DGPL), Maxamuud Muuse Xirsi (Gen. Cadde Muuse) oo cinwaankiisu yahay "Tub-Raaca Siyaasadda Dawladda Puntland" [oo ay faafisay Warbaahinta Xafiiska madaxtooyada Puntland] ayaa si qeexan u sheegay in Puntland aysan xilligan ka mid ahayn Dawladda Federaalka Ku-Meel Gaarka ah (DFKMG) iyo in Puntland u madax bannaantahay Shuruucdeeda ilaa laga helayo dastuur ay yeelato DFKMG.
Waxana uu Gen. Cadde Muuse hadalka u dhigay sidan: "Inta laga helayo dastuur federaal ah oo loo dhan yahay iyo dhismaha dawlad goboleedyo ku qanacsan qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, taageerada Dawladda Puntland u hayso DFKMG ah sina looguma qaadan karo in ay Puntland ka mid tahay DFKMG ah - Puntland waa u madax bannaan tahay shuruucdeeda, siyaasaddeeda iyo daneheeda."
Qoraalka Gen. Cadde Muuse ayaa kusoo beegmay laba maalmood kaddib [19/3/2008] markii qoraal ka soo baxay Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta DFKMG, Eng. Maxamuud Cali Saalax (Kaanje) uu ganafka ku dhuftay sharciga Batroolka ee Puntland, isagoo yiri: "Waa arrin aan la ogolaan karin in Dawlad Goboleedka Puntland oo ah laf-dhabarta Xukuumadda Federaalka KMG ee Soomaaliya ay si bareer ah ugu tacadido xeerka u yaal XFKMG ee Soomaaliya, kaas oo si cad u qeexaya awoodda ay kala leeyihiin Xukuumadda FKMG iyo Dawlad goboleedyada. Awoodahaas oo sheegaya in khayraadka dabeeciga ah, sida batroolka, macdanta, iwm ay yihiin hanti qaran masuulna ay shacabka uga tahay Xukuumadda FKMG ee Soomaaliya; ayna tahay awoodda iyo masuuliyadda XFKMG, in ay u dajiso siyaasad iyo sharci lagu maamulo si looga faa'iideeyo dhammaan shacabka Soomaaliya."
Maamulka Gen. Cadde Muuse waxa uu hore ugu hanjabey haddii DFKMG ay soo "farageliso" arrimaha Batroolka Puntland in markaas DGPL ay ka go'i doonto DFKMG. Waxaana jira dastuur cusub oo Puntland samaysaneyso (oo aan weli la ansixin) kaas oo u muuqda mid arrintaas go'i-taanka u gogol dhigaya.
Weli ma jiro war sugan oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha DFKMG, col. Nuur Cadde, oo ku aadan hadalka cusub ee madaxweynaha DGPL ku sheegay in aysan ka mid ahayn DFKMG iyo weliba dastuurka cusub ee ay samaysaneyso Puntland.
Sharciga batroolka ee [19/3/2008] ay u codeeyeen Golaha Wakiillada Puntland [oo codkii noqday barbar dhac 21-21], ayaa muran weyn dhaliyey. Xildhibaannada Puntland qaarkood waxay ku doodayaan in guddoomiyaha baarlamaanku uu jebiyey xeer hoosaadka Baarlamaanka Puntland. Waxaana jira warar soo baxaya oo tibaaxaya in qaar kamid ah Golaha Wakiilladu ay qorshaynayaan in Baarlamaanka la hor keeno mooshin (cod-bixin) xilka looga qaadayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Axmed Cali Xaashi, maadaama, ayey yiraahdeen, uu jebiyey xeer ku qoran dastuurka. Waxa wararku tibaaxeen in arrintaas xil ka qaadista ay baaqan karto oo keliya haddii Guddoomiyihu uu ka noqdo ansixintii sharciga Batroolka oo uu baarlamaanka kusoo celiyo si markale looga doodo.
Arbaca, June 21, 2006 ayey ahayd markii Golaha Wakiilada Puntland ay xilkii ka qaadeen guddomihii hore ee Golaha Baarlamaanka DGPL, Cismaan Dalmar Yuusuf, kaddib markii cod bixin loo qaaday. Xilkaqaadistaasi waxay timid kaddib markii 7 xubnood oo ka tirsan baarlamanka DGPL ay soo gudbiyeen mooshin xilka looga qaadayo guddoomiyahii hore. Arrimaha loo sababeeyey in xilka looga qaaday Cismaan Dalmar Yuusuf waxaa ka mid ahaa: in uu ku tagri falay shaqadii guddoomiya-nimada baarlamaanka isla markaana uu ku dhex milmay golaha xukuummada (dawladda), buriyayna qodobo ka mid ah dastuurka iyo in uu lug wayn ku lahaa hawsha macdan baarista/khayraadka deegaanada Puntland iyo qodobbo kale. Muddo bil ah kaddib ayaa July 20, 2006 waxay baarlamaanka Puntland guddoomiye u doorteen Axmed Cali Xaashi (oo helay 32 Cod), waxaana maalintaas golaha fadhiyey 61 kamid ah 66-ka ay ka kooban yihiin golaha wakiillada Puntland.
Qoraalka [22/3/2008] ee Madaxweynaha DGPL, Gen. Cadde Muuse, soo saaray waxa uu si gaar ah ugaga hadlay siyaasadda Puntland, siyaasadda Heer-Qaran iyo beesha Caalamka, waxana uu u qornaa sidan:
TUB-RAACA SIYAASADDA DAWLADDA PUNTLAND
Sabti, Maarso 22, 2008 | English Version read here
Garowe, Puntland: Nuxurka siyaasadeed ee Dawladda Puntland (DP) wuxuu u taagan yahay saddex arrimood oo lagama maarmaan ah:
Tan kowaad, in degaanka Puntland ka badbaado colaadaha sokeeye oo ka dhasha maamul la�aanta iyo is-herdiga kooxo siyaasadeed oo u kala adeegaya dana gurracan;
Tan labaad, in ay wax ka baadi-goobto dib-u-yagleelidda dawlad dhexe oo Soomaaliyeed oo ku salaysan hannaan federaal ah, kaasoo ah habka keliya oo lagaga sabata-bixi karo awood meel keliya ku urursan iyo kala-googo� iyo
Tan saddexaad, in ay beesha caalamka la kaashato xal-u-helidda mushkiladda Soomaaliya guud ahaan iyo dib-u-dhiska iyo horumarinta degaanka Puntland gaar ahaan.
Qaybaha soo socda ee murtida qoraalkanu waxay shaaca ka qaadayaan tub-raaca Dawladda Puntland ee ku kala aaddan xaaladda gudaha Puntland, siyaasadda heerka qaran iyo sida beesha caalamku gacan uga geysan karto labadaas arrimood.
Tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991kii ilaa bartamihii sannadkii 2006, waxaa Puntland ka jirey nabad, xasilooni iyo horumar dhaqaale marka dalka intiisa kale loo eego. Waxaa ayaandarra ah in waayahaan dambe ay Puntland soo food-saareen qalalaase kaga yimid koonfurta iyo gobollada woqooyi galbeed Soomaaliya. Dhinaca koonfurta, xoogaggii Maxkamadaha Islaamiga ku magacawnaa iyo xag-jiriinta Al-Shabaab baa waxa ay u soo kaba-gashadeen duullaan xukun-doon ah iyo falal argagixiso oo ay la soo beegsadeen Puntland iyagoo si gurracan ugu been-abuuranaya diinta Islaamka ee muqaddaska ah. Waxaa dhulka Puntland marin ka dhigta dhallinyaro badan oo ka yimaada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya oo u gudba woqooyi galbeed, dabadeedna ku soo laabta Puntland oo gabood-fal ka geysta. Dhinaca woqooyi galbeed, waxaa weerarro hubaysan oo is-daba-joog ah Puntland ku soo qaaday Maamulka Hargeysa oo 15kii Oktoobbar sannadkii hore ku qabsaday magaala-madaxda gobolka Sool ee Laas Caanood una sii tafa-xaydanaya dhul-ballaarsi kale.
Labadaas arrimood waxa ay kala dhantaaleen dadaalkii Puntland ugu jirtey hirgelinta barnaamijka maamul-wanaagga iyo dhaqaalihii awalba koobnaa ee jirey.
Iyadoo ay jiraan dhibaatooyin baahsan oo kulligood u baahan wax ka qabasho, waqtigan la joogo Dawladda Puntland waxay halkan ka caddayneysaa in ay dardar gelineyso fulinta waajibaadyada dastuuriga ah una kala hor-marineyso sida ay mudaanta u kala leeyihiin:
1. Soo-celinta gacan-ku-haynta magaala-madaxda gobolka Sool ee Laas Caanood iyo kafaala-qaadidda difaaca dhammaan xuduudaha Puntland;
2. Adkaynta ammaanka gudaha;
3. Sii-ambaqaadidda hirgelinta maamul-wanaagga iyo
4. Dhammaystirka geeddi-socodka dimoqoraaddiyadda Puntland.
Taliska Daraawiishta Puntland oo dib-u-habayn lagu sameeyey wuxuu ku hawllan yahay tayaynta iyo dhismaha ciidan hanan kara difaaca dalka. Dawladda Puntland waxay wasaarad cusub u aasaastay arrimaha Amniga Gudaha taas oo u xil-saaran ka-hortegidda fal-dembiyeedyada iyo gacan-ku-dhigidda dembi-falayaasha. Waxa xukuumaddu u hurtay amniga gudaha 5% miisaaniyad ka baxsan saamigii ay hey�adaha ammaanka guduhu ku lahaayeen miisaaniyadda caadiga ah. Dawladda Puntland waxay kaloo fiira gaar ah u yeelaneysaa xoojinta Garsoorka iyo Ciidanka Asluubta oo lama huraan u ah u-hoggaansanaanta sharciga iyo helitaanka caddaaladda.
Dhinaca maamul-wanaagga, waxaa xusid mudan aasaasidda Guddiga Shaqaalaha Rayadka ah ee Dawladda (Civil Service Commission) oo ay hey�adda UNDP gacan ka siineyso sidii shaqaalayntu u noqon lahayd mid ku timaadda baahida dhabta ah ee maamulka iyo mutaysi, si wax-soo-saarku u kordho, taas oo xukuumaddu u aragto tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Wasaaradaha Maaliyadda iyo Qorshaynta iyo Xiriirka Caalamiga ah oo dhinac ah iyo Bangiga Adduunka iyo UNDP oo dhinac ah waxay in mudda ah wadeen qiimayn la xiriirta baahida hagaajinta maamulka arrimaha Maaliyadda iyo Lacagta, waxaana ka dhashay hindisayaal cusub oo si dhaqso ah fulintoodu u bilaaban doonto, kuwaasoo la xiriira dhidbidda hab-maaliyadeed casri ah oo ku abbaaran toosinta iyo casriyaynta ururinta cashuuraha, kobcinta dakhliga, beekhaaminta kharajka, maaraynta miisaaniyadda, kontroolka lacagta iyo hanti-dhawrka.
Dib-u-eegista dastuurka Puntland waxay mareysaa heer gabagaba ah, waxaana Puntland, Xukuumad iyo Baarlamaanba, ka go�an in bartamaha sannadkan loo bandhigo afti dadweyne si loogu gogol-xaaro curashada xisbiyo siyaasadeed iyo qabashada doorashooyin xor ah.
Siyaasadda Heer Qaran
Tan iyo intii ka damabaysey dhismihii Dawladda Puntland 1dii bishii Agost 1998kii iyo 8dii sano oo ka horreeyeyba, Puntland waxay u heellanayd kana qayb-qaadaneysey dib-u-heshiin dhexmarta dadka Soomaalida iyo soo-celinta dawlad Soomaaliyeed. Waxaa laga wada dheregsan yahay kaalintii firfircoonayd ee ay Puntland ka gashay Shirweynihii Dib-u-heshiisiinta oo ku dhammaday dhismaha Dawladda Federaalka Ku-Meel Gaarka ah (DFKMG). Sidoo kale, Puntland waxay taabba-gelinta dawladda u hurtay dhaqaale iyo cudud.
DFKMG ah isla markii ay hanatay xafiiskaba waxaa la kowsadey kala-qaybsanaan hey�adihii dawladda iyo is-qabad dhex-galay mas�uuliyiintii xilalka ugu sarreeya hayey. Waxaa iyana jirey diidmo kaga timid xoogag ka soo horjeeda mabda�a lagu soo dhisay dawladda.
Is-biirsiga arrimahaasu wuxuu DFKMG ah geyaysiiyey in ay gudan kari weydo xilalka muddada ku-meel gaarka ah sida sugidda nabadda iyo xasilloonida, dib-u-heshiisiin, diyaarinta dastuur federaal ah iyo hirgelinta hannaan federaal ah. Inkastoo ay intaasu jirto, muddadii xukuumadda FKMG ahna in yari ka harsan tahay, dawladda dhowaan la dhisay iyo baaqii wadahadalka ee ay bixisay waxa ay leeyihiin yididiila cusub.
Dawladda Puntland waxa ay diyaar u tahay, siina wadi doontaa, taageeridda Dawladda Federaalka Ku-Meel Gaarka ah, waxana ay beesha caalamka weydiisaneysaa in ay si weyn ugu hagar baxaan si ay u gudato waajibaadka xilliga ku-meel gaarka ah inta ay ka gaadho.
Dawladda Puntland oo mar kale ku celineysa in dib-u-yagleelidda dawladnimada Soomaaliya ay tahay waajib waddani ah oo aan ka-daalis mudnayn, waxay goosatay in ay faahfaahin dheeraad ah sida soo socota uga bixiso siyaasadda qaran ee ay higsaneyso:
"Inta laga helayo dastuur federaal ah oo loo dhan yahay iyo dhismaha dawlad goboleedyo ku qanacsan qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, taageerada Dawladda Puntland u hayso DFKMG ah sina looguma qaadan karo in ay Puntland ka mid tahay DFKMG ah - Puntland waa u madax bannaan tahay shuruucdeeda, siyaasaddeeda iyo daneheeda." Gen. Cadde Muuse
English Version: Puntland�s support of the TFG should not be interpreted in any manner that Puntland is part of the TFG
(1) Puntland waxaan sina loo soo marin doonin hannaan dawladeed oo taladu ku urursan tahay dawlad dhexe, gobollada iyo degmooyinkuna yihiin kuwa jideeya awoodaha dawladdaas oo keliya - hab dawladeedka qaabkaas ahi wuxuu dadweynaha baday in ay ka takoornaadaan talada dalka, aakhirkiina wuxuu horseeday burbur dawladeed;
(2) Puntland ma aqoonsana mana aqoonsan doonto in baadi-goobka xal dawlad dhexe oo Soomaaliya yeelato loo maro afkaarihii gumeysigii reer Yurub ku qaybsadeen dalka Soomaaliya taas oo ay beddeshey midowgii iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dastuurkii Jamhuuriyaddaas oo ummadda Soomaaliyeed ku ansixisay afti dadweyne 1961kii iyo
(3) Inta laga helayo dastuur federaal ah oo loo dhan yahay iyo dhismaha dawlad goboleedyo ku qanacsan qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, taageerada Dawladda Puntland u hayso DFKMG ah sina looguma qaadan karo in ay Puntland ka mid tahay DFKMG ah - Puntland waa u madax bannaan tahay shuruucdeeda, siyaasaddeeda iyo daneheeda.
Dawladda Puntland waxay mahadnaq ballaaran u celineysaa beesha caalamka oo hawlohoodu qayb libaax ka cayaaraan daryeelka iyo gargaarka dadka tabaalaysan iyo kuwa bara-kacay ee gudaha iyo kuwa ka yimaada gobollada kale ee Soomaaliya iyo dalalka deriska ah, arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo qaybo kala geddisan oo baahiyi ka jirtey. Taageerada deeq-bixiyayaasha, hey�adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa caalamiga ah la�aantood Puntland ma awooddeen in ay meelo badan iska daboosho.
Waxaan shaki ku jirin in ay beesha caalamku isku taxalujisay Soomaalida heshiisiinteeda, kaalmaynteeda iyo sidii ay dawladnimadoodu cagaha isugu taagi lahayd. Abaal weyn ayey dadka iyo dawladda Puntland ugu hayaan beesha caalamka dadaalkaas, waxana ay ku sii adkayneysaa in ay qiimayntooda ku xoojiyaan qodobbada soo socda:
1. In ay ku baraarugto inta ay le�eg tahay baaxadda mixnadda ka taagan Soomaaliya iyo cawaaqib-xumada ay ku yeelan karto Geeska Afrika, lana timaaddo hal-abuur iyo ajende muddada kala-guurka loogu gudbi karo hab federal ah oo dimoqoraaddi ah oo wax kala haga;
2. In ay sii wadaan habka saddex-qayboodka ah oo ay iskaashiga iyo taageerada ula wadeen qaybaha Soomaaliya ka kooban tahay oo ah Puntland, Somaliland iyo South-Central/TFG.
3. In ay mowqif midaysan ku wajahdo xaaladda Soomaaliya;
4. In ay ka fuliso Soomaaliya casharadii waxtarka yeeshay ee laga bartay dalalka soo maray dhibaatooyin la mid ah kuwa Soomaaliya, iyagoo tixgelinaya talooyinka waxgaradka Soomaalida ay ka dhab tahay xal-u-helidda Soomaaliya iyo
5. In ay Puntland diyaar u tahay soona dhowayneyso maal-gashi caalami ah dhinacyada kala duwan ee khayraadka badda, berriga iyo hawada.
Ugu dambayntii, Puntland, dawlad iyo dadweyneba, waxa ay ka digeysaa in laga feejignaato taageeridda damaaciga dhinac ka mid ah dhinacyada Soomaaliya, taas oo 17kii sano oo la soo dhaafay ahayd caqabadda ku gudban xal-u-helidda dhibaatada Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawlada Puntland ee Somaliya
Xigasho: Warbaahinta Xafiiska madaxtooyada Puntland
Maarso 22, 2008: Hargeysa: Madaxweynaha Maamulka Somaliland, Daahir Riyale Kaahin, ayaa [22/3/2008] soo saaray wareegtooyin uu ku magacaabay 16 Degmo iyo 6 Gobol oo cusub, kuwaas oo kala ah:
Gobolada Cusub iyo magaalo Madaxdooda:
Gobolka Gabiley oo magaalo madax ay u noqonayso GABILEY
Gobolka Badhan oo magaalo madax u noqonasyo BADHAN
Gobolka Buuhoodle, oo Magaalo madax u noqonasyo BUUHOODLE
Gobolka Salal, oo magaalo madax u noqonayso SAYLAC
Gobolka SARAAR oo magaalo madax u noqonayso CAYNABO
Gobolka Oodweyne oo Magaalo Madax u noqonaysa Oodweyne
Degmooyinka Cusub iyo Gobolada ay ka tirsanaan doonaan:
Degmada WAJAALE, Gobolka GABILEY
Demgada WIDH-WIDH, Goblka Buuhoodle
Degmada QORULUGAD, Gobolka Buuhoodle
Degmada GO�DA WEYN, Gobolka Saaxil
Degmada HARASHEEKH, Gobolka Oodweyne
Degmada RAYDAB KHAATUMO, Gobolka Oodweyne
Degmada GARBA DADAR, Gobolka SALAL
Degmada BOON, Gobolka SALAL
Degmada XARIIRAD, Gobolka SALAL
Degmada LAASCIIDLE, Gobolka Saaxil
Degmada WAR-IDAAD, Gobolka SARAAR
Degmada CEELAL, Gobolka SARAAR
Degmada WAR-CIMRAAN, Gobolka Togdheer
Degmada MAGAALO CAD, Gobolka Awdal
Degmada KAL-BAYDH, Gobolka Sool
Degmada XAAJI-SAALAX, Gobolka Oodweyne
Daahir Riyaale waxa uu markii hore maalinnadii (22/3/2008) soo magacaabay 14 degmo, laakiin isla fiidkii ayuu kusoo daray labada degmo oo kale oo kala ah Degmada KAL-BAYDH oo kamid noqoneysa Gobolka Sool [una dhow Laascaanood] iyo Degmada XAAJI-SAALAX oo ka mid noqonaysa Gobolka Cusub ee Oodweyne [markii horese ka tirsanayd Gobolka Sool].
Puntland oo ka Jawaabtey Gobolladii ay Samaysay Somaliland...
Madaxweyne-ku-Xigeenka DGPL, Xasan Daahir Maxamuud "Afqurac" ayaa [23/3/2008] waxa uu warsaxaafadeed ku magaalada Garowe kaga jawaabey wareegtadii [22/3/2008] ka soo baxday Daahir Riyaale ee uu kusoo magacaabay gobollada.
Xasan Daahir waxa uu si gaar ah digniin uga muujiyey gobollada uu soo magacaabay Madaxweynaha Maamulka Somaliland Daahir Riyaale Kaahin (ee Deegannada Badhan iyo Buuhoodle [Cayn]). Afqurac oo arrintaas ka hadlaayey waxa uu xusay:
�Waxaa gobollo uu isagu (Daahir Riyaale) magacyo ula baxay xaggiisana ka taasi wax ka jira ma jiraan , waxayna soo kordhineysaa buuq iyo isku dhac cusub iyo degaano cusub oo colaadii hore oo jirtey wax kusoo kordhiya." [ Dhegeyso mp3]
Xasan Daahir waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha la xiriira khayraadka dabiiciga ee Punltand iyo sharciga ay Puntland u samaysay. Waxaa uu sheegay in Puntland ay lashaqayneso DFKMG, laakiin in DFKMG laga rabo in marka hore ay isku xirto gobolada dalka. Balse hadda la joogo ay Puntland sharcigaas fulineyso ilaa laga gaarayo xilli ay DFKMG ay dalka oo dhan maamusho. Waxaa arrintaas sharciga batroolak Puntland si xoog leh uga soo hor jeeda DFKMG. [Akhri khilaafka soo kala dhexgalay...]
Maarso 22, 2008: Madaxweynaha DFKMG, C/laahi Yuusuf Axmed ayaa kusoo laabtay magaalada Muqdisho kaddib markii uu safar ku tegey dhawr dal oo ka mid ah Qaarada Afrika, sida dalka Sinigaal oo uu kaga qayb galay shir ay yeesheen dalalka Islaamka. Markii uu soo gaarey Garoonka Muqdisho waxaa halkaas ka qaaday gawaarida qafilan ee ciidamada AMISOM, kuwaas oo geeyey Xarunta Madaxtooyada iyadoo aad loo ilaalinayey jidka isku xira Garoonka iyo Villa Somalia.
Faafin: SomaliTalk.com | March 22, 2008
Sarkaal Puntland ah oo Digniin Kulul u Diray Shirkadaha Ajnebiga ah ee Qandaraaska la gala DGPL..
Wasiirka Batroolka ee DFKMG oo si cad uga horyimid Sharciga Batroolka Puntland
iyo Baarlamaanka Puntland oo Ku kala Qaybsamay Ansixinta Sharciga Batroolka Puntland.. Akhri
Puntland: Maraarkiibta Dagaalka ee Maraykanku haka baxaan Xeebta Soomaaliya, haddii aysan la dagaalamayn Burcadda....
Wasiirka kalluumaysiga Puntland ayaa eedayn kulul u jeediyey Maraykanka, waxana uu sheegay in USA qayb ka yahay ammaan darrida ka jirta Puntland... Dhegeysi/Akhri
Soomaali Argaggaxiso ahi ma jirto- Soomaaliya ma joogaan Soomaali Argaggaxiso ah
Sidaas waxaa yiri Safiirkii DFKMG u fadhiyi jirey Itobiya xilligii ay ku duushey somalia Dhegeysi/Akhri
"Soco Shacabka Ayaad Ka Mid Tahaye!!"
Dhacdo la yaab leh oo ka dhacdey Diinsoor.... Warbixin dheer....